Boutique chipo bhokisi
Yakakwirira-magumo ematehwe echishongo bhokisi
Pearl jewelry bhokisi
Yakakwira-yekupedzisira bhizinesi notibhuku
Akanaka matiketi ekunyorera
Cartoon tattoo zvidhori
Nei uchipa zvipo uine wakasarudzika chipo bhokisi kurongedza
Kuti uone kana chipo chakakodzera, kutanga pane zvese zvinoenderana nekurongedzwa kwayo. Kana chipo chakanyatsosarudzwa chisina rongedza rakasarudzika, zvinobva zvadzikisira chipo chaunopa. Kana iwe ukabatanidza kukosha kune yekupedzisira maitiro e "kurongedza", kunyangwe kana chipo pachacho chisina kudhura zvakanyanya, dazz ...
Kwakatangira mazai eIsita
Kutanga: Tsanangura Mhandara Maria Magdalena achichema, uye pakarepo akaona vanhu vaviri vakapfeka mbatya dzinopenya vakamira padivi pavo. Paakadzokera kumba, akapenda chiono chaakaona paIsita zai Kukwira kumusoro, uyezve kuvadzidzi vaJesu. Vadzidzi vakashandisawo njiva kuparadzira shoko. ...
Nei vanhu vachisarudza zvitupa zvetatoo?
Chitambi chetatoo mhando yetiki inonamirwa nemuviri. Izvo zviri nyore uye zviri nyore kushandisa, hapana kurwadziwa, kunamatira kunogona kugara kwevhiki, kusatya kusuka, uye kusakuvadza kune ganda. Naizvozvo, zviri nyore kutambirwa nemunhu wese kupfuura maTatoo echinyakare, uye zviri nyore kuchinja ...
2021 yekudhinda indasitiri yekuvandudza maitiro
Iwo makuru ekuongorora mapoinzi enhoroondo yekuongorora pamusoro pechimiro cheiyo indasitiri yekudhinda ndeiyi inotevera: 1) Hupenyu hwekutenderera indasitiri yekudhinda. Nekudzidza iyo yekudhinda indasitiri yemusika kukura chiyero, inoda kukura chiyero, chigadzirwa chakasiyana, huwandu hwevanokwikwidza, kupinda uye kubuda mhinganidzo, ...
Chikafu Chipo Bhokisi Musika Saizi 2021 | Global Indasitiri Kugovana, Bhizinesi Kukwidziridziro Strong, Vatambi Vakakosha, CAGR Mamiriro, Ekukura Mikana uye Forecast kusvika 2027
New Jersey, USA-Rondedzero yazvino yemusika yekutsvaga yakanzi "Chipo Chipo Bhokisi Musika" yakarongedza zvakarongeka zvirimo mukati mekudya kwechipo chebhokisi rekutsvaga. Chirevo ichi chakaita zvakadzama kudzidza nezvechipo chechipo bhokisi remusika, ichitarisa pane azvino kukura maitiro nemaitiro ekuvandudza ...
Zvinorehwa nechipo kurongedza?
Chipo bhokisi kurongedza zvishoma nezvishoma chave kudikanwa chehupenyu. Kuvavha kunomiririra kuravira, moyo, maitiro, tsika, nezvimwe, uye kushopera kumashopu kunosimudzira kutengeswa kwezvipo, kunounza kutengesa kwakanaka kune vatengesi, uye kunowedzera kusimudzira kwechigadzirwa. Kunyangwe kana pasina mutengesi ita ...
Matiketi anokanganisa ganda here?
Vanhu vazhinji vanoda kutora tattoo asi vanotya kuti hazvisi nyore kubvisa mushure mekunyorwa. Ikozvino pane matiketi ekunyorera anowanikwa. Kwete chete iwe unogona kuti uchinje chimiro sezvaunoda, asi kubviswa kwacho zvakare kuri nyore. Icho chinamato chinonamira zvakananga paganda harmfu ...
Iyo fekitori yekuratidzira chipo bhegi kugadzirwa, iyo purofiti haina kunyanyoita zvakanyanya sezvaunofunga
Izvi hachisi chokwadi nekuti tiri kuyedza kugadzirisa mitengo yedu pachedu. Muchokwadi, iyo purofiti yemazhinji maindasitiri ekugadzira atove mashoma kwazvo. Izvi hazvingogadziriswi chete nenzvimbo yeindasitiri mukutengesa, asi zvakare zvine hukama zvakanyanya nemafambisirwo enharaunda. Kana ...
Chii chakakosha kukosha kwebhuku rekunyorera maitiro? Sei uchida kugadzirisa bhuku racho
Kukosha kwebhizimusi notibhuku kugadzirisa Bhizinesi Notepad Gu Mingsi inoshandiswa sekanyoreso kebhizinesi hofisi. Mune zviitiko zvekushandisa kwechigadzirwa, zvinonyanya kuve mumahofisi, makamuri emusangano, nezvimwewo, saka ane hunhu hwakakodzera kuti vanhu vebhizinesi vashandise uye nyore. Bhizinesi notibhuku refe ...
Nei uchisarudza mapepa mabhegi uye iro basa remahombodo
Kurongedza bhegi kurongedza kwete chete kunopa nyore kune vatengi, asi zvakare kunotora mukana wekusimudzira zvigadzirwa kana zvigadzirwa zvakare. Bhegi rakagadzirwa zvakanaka rinozoita kuti vanhu varifarire. Kunyangwe kana bhegi racho riine chiratidzo chekumaka kana kushambadza, vatengi vanozofara kuishandisa zvakare. Rudzi urwu ...
Kutaura nezve kusimudzira maitiro epepa zvigadzirwa mukugadzira dhizaini
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwesainzi uye tekinoroji, bepa rave iro rakanyanya kutariswa u sed uye rinonyanya kushandiswa kurongedza zvinhu muindasitiri yekurongedza yenyika dzese pasi. Inoshandiswa zvakanyanya mukutengesa kurongedza uye kutakura kurongedza kwezvinhu, ...
Nei uchipa zvipo mune akaisvonaka zvipo mabhokisi？
Kuchinjana kwezvipo ndeimwe yenzira dzakakosha dzekuti vanhu varatidze hushamwari uye nekuvandudza hukama. Zvipo zvinopihwa kune zvakasiyana-siyana zvezvinhu: vana, vechidiki, vanhu vepakati nepakati, vanhu vakuru, vadzidzisi, vanachiremba, nevamwe vanhu vezera rakasiyana uye kuzivikanwa kwehunyanzvi. Siyana ...